‘चरी जेलैमा’लाई दुई हप्तामै एक करोड भ्यूज - Baikalpikkhabar
‘चरी जेलैमा’लाई दुई हप्तामै एक करोड भ्यूज
काठमाडौं / लोकदोहोरीकी चर्चित गायिका विष्णु माझीको स्वरमा सार्वजनिक तीज गीत ‘चरी जेलैमा’ले युट्युबमा एक हप्तामै करोड भ्यूज पाउन सफल भएको छ । युट्युबमा सार्वजनिक भएको १३ दिनमै गीतको भ्यूज १ करोड पुगेको हो ।
योसँगै युट्युबमा हेरिएका गीतमध्ये छोटो समयमा एक करोड भ्यूज पाउने गीतमा ‘चरी जेलैमा’ले रेकर्ड राखेको छ । ‘पुतलीको भट्टी’ भाग १७ का रुपमा सार्वजनिक ‘चरी जेलैमा’मा विष्णुकै श्रीमान् सुन्दरमणी अधिकारीको शब्द तथा संगीत छ । गीतमा विनोद बाजुरालीको एरेन्ज, महिमा आचार्यको कोरस गायन छ ।
शिव बि.क.को कोरियोग्राफीमा सुन्दरमणीले नै निर्देशन गरेको भिडियोमा ललिता पौड्यालको अभिनय छ । सार्वजनिक भएको सुरुवाती दिनमा औसत चर्चामा रहेको यस गीतले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाउँदै गएसँगै भ्यूजमा पनि नयाँ रेकर्ड राखेको थियो । यो गीतले २४ घन्टामा १० लाख बढी हेरिएको गीतको समेत रेकर्ड राखेको छ ।
गीतका शब्दहरु सरल र मार्मिक छन् जसले स्रोताको मन जितेको छ । गीतले छोटो समयमा नै नयाँ रेकर्ड राखेपछि भिडियोका कोरियोग्राफर शिव बि.क.ले दर्शकलाई धन्यवाद दिदै खुशी साटेका छन् ।
मङ्गलबार, १५ भदौ, २०७८, दिउँसोको १२:४० बजे
आज हरितालिका तीज, पुरुष र महिला दुवैले गर्नुपर्ने तीज व्रत
दमक, २४ भाद्र / भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिनमा मनाइने हरितालिका (तीज) पर्व आज देवादिदेव महादेवको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ । भाद्र शुक्ल तृतीयामा व्रत बसी शिव पार्वतीको पूजा, उपासना गरेमा पारिवारिक सुख, शान्ति र कल्याणको प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास छ
दरखाने तयारीसँगै चार दिने तीज पर्व आजदेखि सुरु
दमक, २३ भाद्र / हरितालिका (तीज) व्रतको तयारीस्वरुप आज दर खाने तयारीमा नेपाली महिला छन् । दरखाने दिनसँगै चार दिने तीज पर्व आजदेखि सुरु हुँदैछ । विशेष गरी नेपाली नारीले मनाउने हरितालिकाअर्थात् तीजको पहिलो दिन आज दर खाइन्छ । माइतीले
काठमाडौं, भदौ १८ / अभिनेत्री ऋचा शर्मा लोकप्रिय कमेडी रियालिटी शो ‘कमेडी च्याम्पियन–२’ बाट बाहिरिएकी छन् । आमा बन्ने मिति नजिकिएपछि उनले शो छोडेकी हुन् । उत्कृष्ट ३ प्रतियोगी छनौटसम्म निर्णायकको रुपमा रहेकी शर्मा फाइनल प्रतियोगितामा भने शोमा अब देखिने
राति अबेरसम्म बस्ने बानी मुटुको स्वास्थ्यको लागि किन खराब छ ?
राम्रो निद्रा राम्रो स्वास्थ्यका लागि महत्त्वपूर्ण छ। समयमा राम्रो निद्रा लिँदा मात्र हाम्रो शरीरले मात्र तपाईंको शरीरलाई आराम दिन्छ । यदि तपाईं दैनिक पर्याप्त निद्रा लिनुहुन्न वा सही समयमा सुत्नुहुन्न भने यसको असर स्वास्थ्यमा देखिन्छ । समयमा नसुत्नुको असर मुटुसम्म
‘पर्फमर अफ द राउण्ड’ भरतमणि पौडेल
कमेडी रियलिटी शो ‘कमेडी च्याम्पियन–२’ का का प्रतियोगी पौडेल आफ्ना दमदार प्रस्तुतिले दर्शक तथा निर्णायकका प्रिय बनेका भरतमणि, सामाजिक सञ्जाल यति बेला चर्चा भरतमणि पौडेलकै छ । गोकुल बाँस्कोटाको क्यारिकेचर गरेर चर्चित बनेका पौडेल शनिबार पूर्व युवराज पारस शाहको नक्कल
नेपाल आइडल’का निर्णायक परिवर्तन, नयाँ निणायकमा को को ?
नेपाल आइडल सिजन-४ को निर्णायकमा शम्भूजित बाँस्कोटा, सुगम पोखरेल र शिवानी मोक्तान ४ भदौ / चर्चित टेलिभिजन रियालिटी शो नेपाल आइडल’का निर्णायक परिवर्तन भएका छन् । फ्रेन्चाइज गायन रियालिटी शो नेपाल आइडलले चौथो सीजनका लागि निर्णायकहरु परिवर्तन गरेको हो ।